Kaniisad kutaala Barlin Oo Loo Ogolaaday In Muslimiintu Ay Ku Dukadaan Salaada Ciida - Borama News Network %
Kaniisad kutaala Barlin Oo Loo Ogolaaday In Muslimiintu Ay Ku Dukadaan Salaada Ciida
Masaajida kuyaala dalka Jarmalka ayaa loo ogolaaday in dadka Muslimiinta ah ku dukadaan salaada ciida, hasa ahaatee waxaa dadka Masaajida tagaya shuruud looga dhigay in ay kala fogaadaan si looga hortago faafitaanka cudurka Caronavirus.
Qaar kamid ah masaajida kuyaala magaalada Barlin ee dalka Jarmalka ayaa jameecadii markii hore ku dukan jirtay aad loo dhimay, waxa ayna taasi keentay in Muslimiin badan waayaan in goob ay ku dukadaan.
Kaniisad ku taalla magaalada Berlin ayaa u ogolaatay muslimiinta kunool magaalada Barlin in ay soo galaan kuna dukadaan salaada ciida, kadib markii ay ku adkaatay in masaajida ku dukadaan .
Masjiska Dar Assalam ee ku yaala Berlin waxaa markii hore halkii mar kuwada tukan jirtay boqolaal Muslimiin ah, balse dowladda Jarmalka ayaa soo rogtay in dadka ay kala fogaadaan 1.5 , waxaana hada masaajida loo ogol yahay 50-qof kaliya in ay ku dukadaan.
Imaamka Maxamed Taha Sabry ayaa bogaadiyay talaabo wanaagsana ku tilmaamay go’aanka kaniisada Martha Lutheran albaabada ugu furtay dadka muslimiinta ah si ay salaada ciida ugu dukadaan.
Madaxwaynaha Maamulka Puntland Oo Dowlada Fadaraalka Ku Eedeeyay In Ay Wado Qorshe Lagu Burburinayo Puntland
65 Qof Oo Ku Dhintay Roobab Mahiigaan Ah Oo Ka Da’ay Dalka Rwanda
Bnnstaff Bnnstaff May 8, 2020
In Ka Badan 30 Ruux Oo Lagu Laayay Weerarro Ka Dhacay Myanmar Iyo Qaramada Midoobay Oo Ka Hadashay
Bnnstaff Bnnstaff April 18, 2020
Wasiirka Hawlaha Guud Ee Somaliland Oo Raali Galin Ka Bixiyay Eedaymihii Uu U Jeediyay Shirkada Haas
Bnnstaff Bnnstaff February 26, 2020